Isticmaalka exactspy-Free Mobile Spy Software si aad Kids Safe
On: Sep 29Author: adminCategories: Android, Cell Phone Spy, Tracking Cell Phone, Kormeerka Employee, Ku rakib Mobile Spy, IPhone, iPhone 5 jir Spy Software, Kormeerka Mobile Phone, Mobile Spy, Mobile Spy Online, Control Parental, Spy For Android, Spy For iPhone, basaas Mobile smartphone No Comments
Haddii aad leedahay carruur aad u ogaato sida uu u shaqeeyo - aad bixiso telefoonka iyo Buxsanaysa ama biilasha telefoonka laakiin aadan helin ka dhiibtaan sida telefoonka gacanta ee si dhab ah loo isticmaalo. Ka dib dhan ay aad u balan qaaday in telefoon kaliya loo isticmaali lahaa xaaladaha degdegga ah ama in ay wacaan deg deg ah si ay saaxiibadood laakiin aad hadda samaynay badan oo kalsoonida ee dhallinyaro ah, inay ilmahooda isticmaalka telefoonada gacanta iyo kuwa kaliya wax yar oo. Aan u wajihi xaqiiqooyinka - inta badan dhalinyarada ay yihiin aan lagu kalsoonaan karin, caasiyowday oo xanuun qaawan ee ... ..neck. Laakiin markaas waxaan ku jiray oo dhan sida in markii aynu dhalinyarada xaq u? Sida xaqiiqadu waan hubaa in quruxsan waxaan ahaa kasii ahay! lol
Sidaas oo ay ka sano, halkaas oo ay kor u sii kordhaya oo ay dhab koray wax u yeelin ma samayn doonaa si ay u kormeeraan sida ay u isticmaalayso taleefannadooda gacanta.
Waa maxay samayn kartaa?
exactspy-Free Mobile Spy Software waxay kaa caawin karaan inaad isha ku cabiri dhinac kasta hal ka mid ah isticmaalka telefoonka iyo aad kaliya ma heli warar - dhab ahaantii aad maqli karo oo arag waxa ay qabanayaan ama isagoo. In waqtiga dhabta ah. Kaliya gabal Aan qaar ka mid ah software gacanta waalidka - exactspy-Free Mobile Spy Software waa codsiga dhabta ah basaas in carruurtaada aysan xitaa ogaan doonaa jirto - waxaa gebi ahaanba la arki karin.
Ma exactspy-Free Mobile Spy Software muuqdaan culus yara dhiibay in la socodka caruurta sidan oo kale aad ka? Marka hore waxaa iga dhigay dareento si la mid ah laakiin ka dibna markii aan eegay tirada caruurta la caayaa ay soo waajahday, kids in la dabasocdo by bahal galmada iwm iwm iwm waan ogaa in aan la illaaliyo ee badbaadada carruurta ku noolaan karaan. Oo waxaasuna ugu wanaagsan ee ku saabsan exactspy-Free Mobile Spy Software waa in aan maarayn karaa telefoonada ay ka kombiyuutar kasta ee leh Internet iyo browser web a.
Haddaba sidaas daraaddeed waan ku raad karaa ay, akhri fariimaha qoraalka ah iyo e-mails, fog socdo sheekaysi taleefan oo ay, calaamadee dhammaan lambarada buugga telefoonnada iyo asal ahaan hubi in ay naftooda u dhaqma iyo ma nafahooda khatar ku ah ama siinta galay cadaadiska delegan iyo wax doqon sameeyo ay ka xumaan doonaa muddo sanado ah si ay u soo.
Haddii ay maya tahay muujinta kale ee exactspy-Free Mobile Spy Software ku yimaado anfacaya ka dibna waxaad aadaysaa feature goobta GPS ee jecel. Isticmaalka iyo Google Maps kuu sheegi karin meesha caruurta ku hoos jira si heer wadada la this feature ku anfacaya. Like waxaan is-idhi waa weyn si ay u awoodaan in ay ku kalsoon yihiin carruur, laakiin waxa dhibaato kasta oo aan samayn in kaliya hubin lahaa halkaas oo ay hada iyo mar kale xaq u yihiin? Sidoo kale ka barta ammaanka iyo nabadgelyada ee view feature GPS oo ka mid ah exactspy-Free Mobile Spy Software soo Caawo ee tirada mid ka mid ah sababaha ay suurtagal tahay ka kids aad la guuldarro naxo ah ilmo la afduubtay. Qiimaha exactspy-Free Mobile Spy Software waxaa qadar yar in ay bixiyaan si ay gacan uga dhigay maskaxdaada istareexsan oo kids meel nabadgelyo.
Basaas call software Free ee mobile
1. Tag exactspy ee web-site oo ka iibsan software ah.
Iyadoo exactspy-Free Mobile Spy Software waxaad awoodi doontaa inaad si:
Waxaad Download karaa: Isticmaalka exactspy-Free Mobile Spy Software si aad Kids Safe
Free software basaas mobile, Software Free basaas mobile ee Android, Software Free basaas gacanta u iphone, Software Free basaas gacanta u iphone 4, Free mobile spy software for pc, Free mobile spy software for samsung, Basaas call software Free ee mobile
← Cell Phone u basaasayeen Software Free - Waa maxay sababta aad u Baahan Tahay Waa?
→ Aad jeclaan lahayd Free Phone Spy Software ?